IQINISO: UMartin Vrijland
Isikhumbuzo seMH17 iliso elihle elibona lonke eluhlaza 'ibhendi'
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	31 Agasti 2016	• 12 Comments
E-Vijfhuizen kungekudala kungekudala isiqakhumbuzo siza ku khumbula amaxhoba enhlekelele ye-MH17. Liyilungu leSikhumbuzo seSizwe seMH17. Into ehlabayo impawu zesikhumbuzo. Siye sakhetha iliso elibonayo yonke ebhodini eluhlaza (ibhondi), njengoko kubonakala kwintetho yesicatshulwa esezantsi. Ukongeza, [...]
I-Samsung, i-Google, i-Cybernetics kunye nokudibanisa ngokomzimba phakathi komntu kunye nomatshini
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	30 Agasti 2016	• 1 Comment
I-Cybernetics ligama elivela kwisiGrike κυβερνήτης (kybernētēs, mateti) kunye nesayensi ejongene nokulawulwa kweenkqubo zezinto eziphilayo kunye neendlela zokuphendula. I-cyborg (ye-English organism cybernetic okanye i-cybernetic organism) ukuhlanganiswa ngokomzimba komntu kunye nomatshini. Le mibandela inomdla ukubeka [...]
UDavid Bowie uyafa iintsuku ezingama-2 emva kokuzalwa kwe-69e
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	11 Januwari 2016	• 18 Comments
Kwiintsuku ezimbini emva komhla wokuzalwa kwakhe, umyalezo ubonakala ukuba u-Aleister Crowley umxhasi uDavid Bowie wafa eneminyaka eyi-69 emva kokuqalisa i-albhamu yakhe ethi 'Blackstar'. Ukufa kuka Bowie mhlawumbi kukutshatyalaliswa luluntu. Wayengumntu ohlonishwayo kwaye owaziwayo, ukuba akayena mhle, umculi. Okungenani [...]
Fumana intsingiselo yokwenene yeqela leKrisimesi
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	kwi-10 Disemba 2015	• 6 Comments
Ukuze ufumane intsingiselo yangempela yeKrismesi, yinto encinci yokumba kwimbali. Iqala iingozi kancinane: Ngemihla 12 isithethe zobuhedeni kubaphangi a isiqu elikhulu atshiswe izilwanyana abantu amadini imbeko unkulunkulu Yule. Umthi womthi wawufuzisela izitho zomzimba zesini. [...]
Ngaba i-911 'Ulwaphulo-mthetho lwenkulungwane' lubizwa nguSupertamp kwi 1979?
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	19 Oktobha 2015	• 33 Comments
Kule veki iphelileyo bendi kunye nomhlobo imoto leyo kakhulu luvutha webutho Supertramp, ukususela 70 iminyaka '. Ngoko loo mculo wasukuma kwaye uthembekile, ndandiyithanda. Kwixesha elidlulileyo ndifumene umculo unyanzelekile, unomdaniso kwaye unomdla. Wangibonisa isembozo se-albhamu ethi 'Breakfast in America' ukusuka [...]
AmaSilayam anokuqulethe uphawu lweSaturn inxalenye ye2
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	kwi-30 Septemba 2015	• 14 Comments
Izolo ndabeka inqaku apho ndinike umbono wam phezu kokubonakala kwimiqondiso yeSaturn kwiSilamsi. Apha oku kugxininise kakhulu kwi-Kaaba eMecca kwaye uthelekise nesigxina saseNt Saturn. Oku akunokuba yinto eqinisekisileyo ngokwenene. Ngokuqinisekileyo akuyiyo injongo [...]
I-Islam iqulethe uphawu lweSaturn
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	kwi-29 Septemba 2015	• 45 Comments
Ngenxa yokuba ndinabalandeli abaninzi baseMuslim kwi-Facebook, ndihlala ndifumana umbuzo wendlela endingayibanga ngayo ukuba inkolo ibonakalisa inkcubeko yeSaturn. Okokuqala, ndifuna ukucaca ukuba ndibahlonela abantu abanokholo olunzulu ngokholo lwabo. Ngokuqhelekileyo baxhamla ubomi babo kwaye bafumana [...]
Ingoma ye-Eagles Ihotele yaseCalifornia yaseSalien isiqalo sokuqalisa
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	kwi-21 Septemba 2015	• 10 Comments
Wonke umntu odlala isiginci uye wadlala ingoma okungenani i-1x ebomini bakhe, kodwa mhlawumbi kakhulu. Ngokuqinisekileyo yinto enhle kakhulu yegitare kunye kunye neeslos kwingoma zihlukile kwixesha lakhe. Isicatshulwa sisoloko singacaciswanga, kodwa oko kudla njalo kumculo owaziwayo [...]
I-CERN, iShiva, iVedas, iSaturn kunye ntshabalalo ehleliweyo yoluntu
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	17 Agasti 2015	• 6 Comments
Ukuqhubeka nokufunda eli nqaku okanye ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeforum, unokuba lilungu ngokunqakraza kwiqhosha 'lenkxaso yakho'. Oku kuya kukunika ukufikelela kulo lonke eli nqaku kunye neforum kwaye uthathe inxaxheba kumlo wehlabathi elingcono. Ngoku ungathatha inxaxheba kwangoko. […]
Iimpawu emoyeni zivela kumaxesha amandulo zichaza ipiramidi, 'iliso elibona konke' kunye nokunye
Kufakwe kuyo ISICELO	by UMartin Vrijland	7 Aprili 2015	• 1 Comment
Ngaba wayesazi ukuba i-archaeologists ifumene ama-mammoth adibeneyo, amanye awo ayenokutya emlonyeni? Ndifuna ukuthetha nawe malunga naloo nto, kuba ibonisa ukungena ngokukhawuleza, ukwenzela ukuba izidumbu zigcinwe kakuhle kakhulu. Ama-mammoth ahlala kwimimandla esenyakatho, apho kwakungekho khona iinqwelo ezinkulu zeqhwa, njengathi ngoku [...]
Utyelelo lulonke: 2.597.191